Oriri nke Fibromyalgia
Ọhụrụ nnyocha na ...
Mgbaàmà nke Fibromyalgia
Ọgwụgwọ nke Fibromyalgia
Ndị kasị pụrụ iche nghọta nke ọrịa bụ ịdị n'otu nke holistic echiche na dialectical echiche. TCM banyere mmadụ dị ka a dum. N'ihi na a ọrịa, ọ bụghị nanị site na ọrịa ahụ n'onwe ya, ma site kwa na aru dum nke mmadụ. Nke a na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịchọta ihe kpatara ọrịa ahụ.
The Nchikota nke omenala Chinese na nkà mmụta ọgwụ na oge a na n'ebe ọdịda anyanwụ na nkà mmụta ọgwụ bụ mwekota nke dum na ihe. The Nchikota macroscopic na microscopic bụ Nchikota ịdị n'otu na dialectics. Ọ bụ ihe kasị bara uru maka ahụ mmadụ na-agbake.
Karịsịa n'ihi na cancer, muscle atrophy, moto ụdị ọrịa akwara, scleroderma, rheumatism, fibromyalgia, ọrịa shuga, ọrịa akụrụ, Nchikota omenala Chinese na Western na nkà mmụta ọgwụ ọgwụgwọ, e ji mara omenala Chinese na nkà mmụta ọgwụ ọgwụgwọ, mmetụta dị oke mkpa.
Ọ bụrụ na chọrọ ịmata otú omenala Chinese na nkà mmụta ọgwụ na-emeso gị ọrịa na otú ikpokọta omenala Chinese na nkà mmụta ọgwụ na n'ebe ọdịda anyanwụ na nkà mmụta ọgwụ na-emeso ọrịa. Ịkpọ ọkachamara ma ọ bụ na-ahapụ anyị ozi.
Nkeji edemede na-agụ